Xiriirka Grand P - Eudoxie Yao, waa tan sababta ay u shaqeyn weyday - teles relay
Xiriirka Grand P - Eudoxie Yao, waa tan sababta ay u shaqeyn weyday
By bryanekobe On Juun 24, 2020
Eudoxie Yao iyo Grand P waxay buun buuniyeen shabakadaha bulshada ka dib markii ay si cad u muujiyeen inay wadajiraan oo ayan ka fogeyn midaynta meherka muqadaska ah ee guurka. Laakiin Eudo wuxuu noo sheegayaa in guur dambe uusan jiri doonin maxaa yeelay waxay xiriir fiican la leedahay qof kale.
Eudoxie Yao iyo Grand P xiriir wanaagsan ayey lahaayeen. Bishii Abriil 2020, Eudo ayaa tan ku xaqiijiyay shabakadaha bulshada: Grand P wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu i guursado. Waan ka taxadaray si aan u arki doonno xabsiga kadib. Grand P wadne weyn buu leeyahay si daacad ahna waan u jeclahay isaga, waxaan ahay naag waana inaan ku socdaa dariiqa. Shabakadiisa ayaa u qaadatay warkan sidii xayeysiin.
Laakiin, waxay umuuqataa in isticmaaleyaasha Internetku ay si sax ah u heleen. Dhowr bilood ka dib, u dhaqaaqista qaab deeqsi ah ayaa si muuqata u beddeshay go'aanka. Way qirtay taas "Grand P ma ahayn mid dhab ah ... Isagu xoogaa wuu wareersanaa". Sida laga soo xigtay iyada, heesaha reer Guinea ma ahan mid ku culus xiriirka.
Iyo xiddigta da'da yar ee reer Ivory Coast, oo ay rag badani damceen, kuma sii ahaan doonaan xaaska Grand P. In kasta oo ay ku faraxsan yihiin isaga, haddana ma sii gudbi doonaan duqa magaalada hortiisa. Eudoxie Yao wuxuu ka wanaagsan yahay xiddigga reer Guinea. Sikastaba, taasi waa waxa ay iyadu ogeysiisay intii lagu jiray barnaamijka Peopl'Emik, oo laga sii daayay La 3.
"Grand P ma ahayn mid dhab ah ... Wuxuu ahaa xoogaa jah wareersan"ayey tiri gabadha yari ee ku jirta telefishanka. Taasoo micnaheedu yahay in jabku si fiican u cuno. Bogga Grand P xaqiiqdi waa la rogay waana "Eudo" u tegey cutub kale oo noloshiisa ah. In kasta oo Kim Kardashian oo reer Afrika ahi aanu shaaca ka qaadin aqoonsiga qofka ay jeceshahay, haddana waxay sheegtay inay sanad kale farxad la dabaalaneyso iyo cidda ka baxsan Côte d 'Ivory.
Maqaalka ayaa ugu horeyn u soo muuqday: https://afriqueshowbiz.com/relation-eudoxie-yao-grand-p-voici-pourquoi-ca-na-pas-fonctionne/
Xiriirka weyn ee P - Eudoxie YaoWaa tan sababta ay u shaqeyn weyday
Faransiiska ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu ciyaar halis ah ka ciyaaray Libya
Ugu dambeyntiina sababaha kala sooca Brad Pitt iyo Angelina Jolie ayaa shaaca ka qaaday